Mpanamboatra sy mpamatsy pelletizing China aglomerator | Masinina manankarena
Mpanatitra: ampitao ny sarimihetsika PP PE na ny flakes ao anaty compactor / feeder. Mpanamboatra horonantsary PE: manapotipotika sy mametaka horonantsary, ary mihetsiketsika ao anaty horonan-tsarimihetsika, mba hahatonga ny fahaizan'ny vokatra avo sy milamina. Rafitra manaparitaka: fitaovana plastika sy gazy mandreraka.
Agglomerator milina Pelletizing
2.Type: pelletizing peratra rano ary karazana mitsangana
pp pe film pelletizing tsipika / Granulator sarimihetsika plastika
Ity milina fanodinana plastika vita amin'ny plastika tokana ity dia milina plastika famelomana plastika iray, izay mety amin'ny karazana fitaovana fako plastika fanodinana sy fanaovana pellet, toy ny PP, HDPE, LDPE, LLDPE Film EVA ary PE foam ary madio voatenona / tsy misy tenona. fitaovana kitapo, sns. Ny horonantsary dia azo tsindriana amin'ny compressor ary avy eo pellet, tsy mila milina crusher.
Ary koa namolavola endrika be dia be, manome antoka fa ity milina ity dia manana fiainana maharitra sy fahombiazana ara-toekarena amin'ny fampiasana.a
1. Screw sy barika dia vita amin'ny 38CrMoAlA na Bi-metallic, vava miditra miditra tsaboina amin'ny firaka manokana: tena matanjaka sy lava fiainana.
2. Fandidiana mora: manana fifehezana mari-pana tsy miovaova izy ary fampisehoana marin-toerana, aorian'ny fanitsiana tsara, mpiasa 1 na 2 dia ampy hampandeha ity milina ity, hanomezana sakafo ireo fitaovana sy hanovana ireo mpandray pellet.
3. Vidina ambany amin'ny fampiasana aorian'ny fanavaozana: izao milina karazana izao dia ara-toekarena kokoa amin'ny loharano herinaratra ary koa ny rano. Mandritra ny androm-piasana maharitra an'ity milina ity dia afaka mamonjy loharano amin'ny angovo maro izy!
4. Avo-bidy avo, androm-piainana maharitra ary tabataba ambany: io no masinina plastika mpamokatra pelletizer famerenana ho an'ny ankehitriny.
Ho an'ireo masinina rehetra ireo dia manana traikefa betsaka amin'izany izahay nandritra ny 10 taona, namako, mandefasa mailaka fotsiny aho, homeko anao ny soso-kevitra sarobidy ary ataoko mifototra amin'ny zavatra takinao izany.
Masinera agglomerator miaraka amin'ny fanapahana rano: manodina ny sarimihetsika PE PP sy kitapo tenona.
Agglomerator milina Pelletizing Large PP sarimihetsika fametahana masinina granulator
Ny masinina rehetra dia ataonay manokana hampihenana ny vidin'ny mpanjifanay.
Vokatra 2.Genuine misy kalitao tena tsara
Misafidy ny fitaovanay ho tena henjana izahay.
Ny fitaovana rehetra tonga amin'ny ozinina dia tsy maintsy mandalo ny fitsapana kalitao
Ny entana tsy manara-penitra dia averina amin'ny mpamatsy.
3. Mpampiasa manao fanompoana afaka miasa
Ny orinasanay dia manome ara-potoana amin'ny fandefasana ara-potoana miaraka amin'ny rojom-pandraharahana madiodio.
Izahay dia mijery tsara ny antsipiriany rehetra amin'ny fizotry ny famokarana.
Ny fanaraha-maso kalitao ao amin'ny orinasa misy anay dia tena henjana.
Ny semi-fanamboarana kilema rehetra dia tsy maintsy tsaboina indray na holavina.
Ny masinina rehetra dia tsy maintsy voamarina alohan'ny hanaterana ny mpanjifanay.
Ny tianay hatao dia ny manome ny mpanjifanay vokatra tsara kalitao miaraka amin'ny fiainana milamina sy maharitra.